ABS အမျိုးအစားများကဘာလဲ။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > abs အမျိုးအစားများ - မေးခွန်းတွေအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေ
abs အမျိုးအစားများ - မေးခွန်းတွေအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေ
ယောက်ျားတွေဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ဂျက်ဖ် Cavaliere, ATHLEANX.com ။ မင်းရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲဆိုတာသိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ သင့်မှာ 8 pack ရှိနိုင်ပါသလား။ ဒီနေ့မင်းကိုရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြမယ်။
သင်၏နေ့ရက်ကာလကိုငါချိုစေမည်။ ဒါပေမယ့်ကပ်ပါ။ စမ်းသပ်မှု။
သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည်သင်၏လက်ကိုကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုငါနားလည်ပြီ။ ငါဒီမှာဆွဲတာတွေအများကြီးမရှိကြပါဘူး။ သင်၏လက်၌တောင်မအောင်မြင်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများစွာရှိပါကဤစာမေးပွဲသည်သင့်ကိုမသက်ရောက်နိုင်ပါ။
ငါ 20% ခန္ဓာကိုယ်အဆီနှင့်လျော့နည်းပြောကြပါတယ်။ သင်ဤစစ်ဆေးမှုကိုစတင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့မင်းလုပ်နေတာကဒီမှာလက်ချောင်းတွေကိုဖမ်းတာပဲ။
သင်၏ခလုတ်ခုံအဆင့်၊ ထို့နောက်သင်ရပ်သည့်အခါ - ဤနေရာတွင်သင်ရပ်လိုသောကြောင့် - သင်ဖမ်းနိုင်သည့်အရာကိုဆုပ်ကိုင်ထားပါကထိရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ထလာပြီ၊ ယခုသင်သည်သင်၏ ABS ကို flex လိုက်သည်၊ သင်၏လက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးသင်၏ abs ကို flex လိုက်သည်။ သငျသညျဤသို့ပြုသည့်အခါသင်အရေပြားနှင့်အဆီနှင့်အခြားအရာအားလုံးကနေဆွဲထုတ်ကြွက်သားခံစားရသင့်ပါတယ်။
ထို့နောက်သင်သည်သင်၏လက်ချောင်းများကိုအတွင်းသို့ညွှန်ပြနိုင်သည်၊ သင်၏လက်ချောင်းများကိုထိုးနှက်သင့်သည်ကိုညွှန်ပြသည်၊ ကျွန်ုပ်ယုံပါ၊ ဒါကအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏လက်ချောင်းများကိုအောက်ဘက်ရှိကြွက်သားများပေါ်သို့တွန်းတင်ပြီးသင်ဝမ်းဗိုက်ခလုတ်အောက်သို့ရောက်နေသည်ကိုကြည့်ပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသင်ကခေါင်ကိုခံစားရလားကြည့်ပါ။ သင်တစ် ဦး ပြန်တက်ခံစားရလျှင်ကြည့်ပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှဘယ်ဘက်သို့ညာသို့စီးဆင်းနေသောခေါင်မိုးတစ်မျိုးမျိုးခံစားရပါကစစ်ဆေးပါ။
မရရှိလျှင် e8 pack ရှိရန်သင့်တွင်အလားအလာမရှိပါက၊ သင်၌ 8 pack ရှိသည်ဆိုပါကသင်၌အလားအလာမရှိပါ။ အားလုံးဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မင်းမှာရှိတာမြင်နိုင်တဲ့ ABS တွေ၊ မင်းမှာ 4-pack ဒါမှမဟုတ် 6-pack ဒါမှမဟုတ် 8-pack ရှိသလား။ သင်အဲဒီမှာရှိတာကတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင့်မှာအဲဒီမှာရှိတာတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ ပြီးတော့သင့်မှာအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့အမာခံရှိတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ ABS သာမကဘဲ၎င်းကိုပုံဆွဲရန် Obliques များရှိပြီးသင်ဟာအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ core ကိုရရှိနိုင်တယ်။ ဒီတော့ဒီမှာငါတို့လုပ်မယ့်အရာဒီမှာကြွက်သားအမှတ်အသားကိုယူပြီးငါဒီမှာရှိရာကိုကြည့်, ကောင်းပြီ? ဒါကြောင့်အပေါ်ဆုံးကနေစပါ။ ငါပြောတာကမင်းမှာပထမဆုံး abs နှစ်လုံးကိုရင်ဘတ်အောက်မှာစပြီးဒီနေရာမှာလိုင်းတစ်ခုလိုင်းရှိတယ်။
ကောင်းပြီ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ၊ ငါတကယ်လုပ်ခဲ့တယ် - ဒုတိယအူရီယန်ပြီးနောက်ကျွန်တော့်အသွင်အပြင်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဒါကနည်းနည်းနက်တယ်။ ဒီမှာအနည်းငယ်မြှောက်တယ်။
ဒါပေမယ့်ဒါကဒီမှာလာ၊ နောက်လာမယ့်အတန်းကိုငါရမယ်။ ဒါကနောက်တဖန်နည်းနည်းပိုမိုကျယ်ပြန်ဖြစ်လာသည်။ ဒါကို diastasis recti လို့ခေါ်တယ်။
နောက်တဖန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အူကျ၏။ ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေပါတယ် ဒီလိုမျိုးဒီကိုလာပါ၊ ပြီးတော့နောက်ဆုံးအတန်းကဒီမှာဆင်းလာပြီးသင့်ရဲ့ဝမ်းဗိုက်ခလုတ်အထိရောက်နေတယ်၊ ​​သင်ဒီမှာနဲ့ဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။
အခုဒီစမ်းသပ်မှုကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ပြီး၊ ဒီoverရိယာကိုလက်ချောင်းများကိုပွတ်လိုက်လျှင်၊ ဒီဟာကိုနောက်ဆုံးစာအိတ်အောက်မှာ၊ ငါလိုချင်သလောက်ဆွဲချပြီးလက်ချောင်းကိုဒီမှာထည့်နိုင်တယ်။ ဒီacrossရိယာကိုဖြတ်ပြီးမျဉ်းကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ ငါ့မှာချိုင့်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။
ချိတ်ဆက်မှုတစ်သျှူးမရှိတော့ပါ။ ဒီတော့ဘာဖြစ်တာလဲ? ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ ကြွက်သား - rectus abdominus - ဘယ်နေရာမှာလဲ။ ဒီမှာမရှိဘူး။ မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်ငါဒီမှာအခြားတီးဝိုင်းမရှိပါ။
ဒါပေမယ့်ဘယ်သူလုပ်နေတာလဲ။ Jessie, ဘာလို့ကင်မရာရဲ့နောက်ဘက်ကိုမလာတာလဲ။ ဒီတော့ဒီမှာငါဂျက်ဖ်ပါ၊ ယေရှဲကိုသင်ပေး၊ သူ့ကိုရအောင်ကြိုးစား၊ သူထွက်လာပြီ၊ ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။ ဒီတော့ကလေးမှာအောက်တစ်ချက်၊ နှစ်၊ သုံးခုရှိတယ်။ ဒါဘာလဲ?! လေး - ရှစ်ထုပ်ကဒီမှာလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လျှောက်လုံးတစ်လျှောက်လုံး။ ဂျက်စီသည်မျိုးရိုးဗီဇနမူနာတစ်ခုလော။ သူဟာတစ် ဦး ဖြစ်လာပေမယ့်ပိုအရေးကြီးတာကသူတကယ်မျိုးရိုးရှိတယ်။
ဒါကိုသင်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ငါလုပ်တာကိုမုန်းတယ်၊ အဲဒါနည်းနည်းနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကခုန်လို့ရတယ်။ ငါစာသားဒီမှာဂစ်တာကြိုးကဲ့သို့အနှုတ်နိုင်ဘူး။
ဒီခေါင်မိုးကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဆီရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားစေတဲ့အတွက်သူ့အား ABS ပေါက်ပွားစေခြင်း၊ အခုကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ ယင်း၏ထူးဆန်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာသေချာပေါက်မရှိသေးသဖြင့်၎င်းနှင့်မတူပါသလော။ သူသည်လမ်းတွင်ရှိနေသော်လည်းသူ၏အလိုတော်အရာတစ်ခုလုံးသည်သူ၏ထင်မြင်ချက်ထက် ပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အခန်းငယ်ခြောက်ခုနှင့်ရှစ်ခု၏စွဲလမ်းမှုသည်အဓိကအချက်ကိုလျစ်လျူရှုထားပြီးသင်၌ရှိသောအရာများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည်။ တကယ်လုပ်နေတာကောင်းလိုက်တာ။
ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုကျော်လွှားပါ။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုမြှင့်တင်လိုသောစိတ်အားထက်သန်မှုကိုလိုချင်ပါက 8-packs မရှိသောအခြားယောက်ျားလေးအချို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ ဦး ။ သူ့နာမည်ကအာနိုးလို့ထင်တယ် တကယ်တော့သူမှာရှိတယ်၊ သူမှာ ၅ လုံးရှိတယ်။
သူ၌လေးနှင့်ထို့နောက်တစ် ဦး navel အောက်မှာသွားဘဲ, ဒါပေမယ့်သူကသေချာပေါက်သူကပြောတယ်ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ Franco ကိုလံဘို, သူ့ buddy ။ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် 8-packs ကိုရှာနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ 8-packs နှင့်အလှအပကောင်းမွန်သောလူသိများသောလူတစ်ယောက် Frank Zane အကြောင်းပင်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
အထုပ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအယူအဆကဒါတွေအားလုံးကကောင်းတယ်၊ ဂဏန်းတွေကိုအာရုံမစိုက်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားလည်းကြည့်ကောင်းတယ်။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီစမ်းသပ်မှုကိုခံယူခဲ့ပြီးအဲဒီမှာရှိခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတီးဝိုင်းလေးကမစွမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာမခံစားရဘူး။
ဘာဖြစ်သလဲ? သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အဆီပမာဏကိုလျှော့ချပြီးသင်ဒီမှာရှိသည့်အရာကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ ငါသည်သင်တို့အဘို့အမျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်မှုပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ အဆိုပါ biceps ပြသ? အကယ်၍ သင်သည်ဤတွင်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုတပ်ဆင်ထားပါက၊
ယောက်ျားတွေ၊ အဲ့ဒီဒဏ်allာရီအားလုံးကိုမေ့လိုက်တယ်။ ဒါလုံးဝမှားပါတယ် သင်၌ရှိသည်အရာကိုဖွံ့ဖြိုးပြီး၊ သင်၌ရှိသောအရာကိုယုံကြည်ပြီးကြိုးစားလုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင်သင်သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကြည့်နိုင်လိမ့်မည်။
Jessie လိုပဲ။ ကောင်းပြီခွေးသားလေးဒီနေရာကိုထွက်သွားပါ။ သူမှာရှစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ကျွန်တော်မထင်ဘူး တကယ်တော့ယောက်ျားတွေ၊ အကယ်လို့မင်းကပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းနည်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုထူထောင်မယ့်အာဟာရအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပေးမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရှာနေမယ်ဆိုရင် ATHLEANX.com ကိုသွားပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်များထဲကတစ်ခုရယူပါ။ ဤဆောင်းပါး၏အောက်ရှိ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ program selector ကိုအသုံးပြုပါ။ သင့်ရည်မှန်းချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသော program ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤအတောအတွင်း၊ အကယ်၍ ဆောင်းပါးသည်အထောက်အကူပြုကြောင်းသင်တွေ့ရှိပါကသင်၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်လက်များကိုအောက်တွင်ချထားပါ။
အနာဂတ်ဆောင်းပါးများတွင်မည်သည့်အရာကိုဖော်ပြရမည်ကိုသိပါစေ။ နောင်လာမည့်ရက်များနှင့်သီတင်းပတ်များတွင်သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမည်။ ကောင်းပြီ၊
ဘာကြောင့် ABS အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိရတာလဲ။
Rectus abdominis တစ်ချိန်က toned, rectus abdominis သင်၏လေး, ခြောက်သို့မဟုတ်ရှစ် pack ကိုဖြစ်လာသည်။
transverse abdominis ။ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းပိုင်းတွင် transverse abdominis တည်ရှိသည်။
အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပ Obliques ။
သြဂုတ် 29, 2019
ဒါဟာအားလုံးမျိုးရိုးဗီဇမှဆင်းလာပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာဗေဒဖြစ်ပါတယ်ကွဲပြားခြားနားသည်, ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကrectus abdominis (ထိုခြောက်လုံးပါသောကြွက်သားများ) သည်လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟု TS Fitness ကိုတည်ထောင်သူနှင့်တည်ထောင်သူ C.S.C.S. မှ Noam Tamir ကပြောကြားသည်။inနယူးယောက်စီးတီး။ အချိုးကျသို့မဟုတ်အချိုးမညီရှိခြင်းအပိုင်းမင်းရဲ့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်” ဟု Tamir ကဆိုသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2021
ငါတို့မှာ abs (သို့) ၆ ခုရှိလား။
သင့်ကိုဖွဲ့စည်းသောကွဲပြားခြားနားသောကြွက်သား ၄ ခုအပိုင်း။ ဤကြွက်သား (၄) ခုစီတွင်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ has မှပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများအားလုံးကိုထိရောက်စွာလေ့ကျင့်ပေးရန်သေချာစေလိုသည်။
အနောက်အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်မှပြုလုပ်သော (အံ့သြစရာမဟုတ်) လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အမျိုးသမီးများသည်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်အပိုင်းThePostGame.com သည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌လိင်အအရှိဆုံးကြွက်သားဖြစ်သည်။ မင်းအတွက်ကံကောင်းတာကမင်းရဲ့ပန်းပုကိုမင်းလုပ်နိုင်တယ်အပိုင်း; သင်၏မျက်နှာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောကံမရှိပါ။ ပြီးတော့မျှမျှတတပြောရရင်တော့အမျိုးသမီးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းတိမ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ဘောင်းဘီနှင့် / သို့မဟုတ်ဘောင်းဘီတိုများသည်ခါးတွင် ပို၍ ချည်နှောင်ထားသည်။
၎င်းသည်သင်၏ဆေးကြောသန့်စင်ဆေးကြောခြင်းသို့သွားသောသင်၏တိုးတက်မှုကိုသတိပြုမိရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဘောင်းဘီတွေဟာပိုပြီးထိတွေ့မှုနည်းနေရင်ဒါမှမဟုတ်ခါးပတ်ကိုတင်းကျပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်၊ဇူလိုင်လ 13, 2015
လူတိုင်းတွင်အဆီအောက်6ဗူးရှိပါသလား။
ဒီဟာကဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ 'လူတိုင်းရှိပါတယ်ခြောက်အထုပ်ကျွန်တော်တို့အများစုအတွက်ဖုံးကွယ်ထားတာပဲ။ ' အဲဒါလုံးဝမှန်တယ်။ခြောက်စီးသင့်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများ (rectus abdominus) သည်အရေပြားနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအလွှာအောက်တွင်ရှိသည်အဆီ။မေလ ၉ ရက် ၂၀၀၅
သတ်မှတ်ထားသောမသာအပိုင်းကောင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ကျန်းမာရေးသူတို့သည်ဆင်းရဲသားများကိုတက်ကြွစွာကူညီနိုင်သည်ကျန်းမာရေး- အထူးသဖြင့်ရေရှည်တွင်။ “ ထိန်းသိမ်းသည်ခြောက်ယောက်ရှိတယ်-အထုပ်မဟုတ်ဘူးကျန်းမာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါ” ဟုစာရေးဆရာနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းဆရာ Leena Mogre ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းမ်မ်သို့ပြောကြားခဲ့သည်ဇန်နဝါရီလ 9, 2019
မိန်းကလေးတွေက abs လိုလား?
အနောက်အီလီနွိုက်စ်တက္ကသိုလ်မှပြုလုပ်သော (အံ့သြစရာမဟုတ်) လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်၊အမျိုးသမီးများအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပိုင်းThePostGame.com သည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌လိင်အအရှိဆုံးကြွက်သားဖြစ်သည်။ မင်းအတွက်ကံကောင်းတာကမင်းရဲ့ပန်းပုကိုမင်းလုပ်နိုင်တယ်အပိုင်း; သင်၏မျက်နှာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောကံမရှိပါ။ မျှတဖို့ဆိုရင်ဒါကမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးများလုံးဝရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်ကြသည်။
မလိုအပ်ပါ။ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောတည်ဆောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်များစွာကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ အပ်နှံခြင်းနှင့်အချိန်ယူရသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤအရာသည်“ ဂျပိန်နှင့်မတူပါ” ကိုနားလည်ပါအပိုင်း။ ' လူတိုင်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများသည်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ကြွက်သားများမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောပုံစံများဖြစ်လာနိုင်သည်။
Rectus Abdominis - နံရိုးမှအစထီးသို့သွားသောကြွက်သားနှစ်ခုတွဲထားသောကြွက်သားများ။ (ဤရွေ့ကားလူအများစုက abs ဟုယူမှတ်သော 'ခြောက်ထုပ်' ကြွက်သားဖြစ်သည်။ )
ဘယ်လို ABS စနစ်မျိုးကျွန်ုပ်လိုအပ်ပါသလဲ။
1 One-Channel၊ One-Sensor ABS ။ များသောအားဖြင့်နောက်ဘီးမောင်းဗင်၊ SUVs နှင့်ပစ်ကပ်ကုန်တင်ကားများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဤစနစ်သည်နောက်ဝင်ရိုးတွင်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုရှိပြီးနောက်မောင်းနှင်မှု၏အရှိန်ကိုတိုင်းတာရန်2Two-Channel, Four-Sensor ABS ။ သုံးချန်နယ်၊ သုံးအာရုံခံ ABS ။4သုံးလိုင်း၊ လေးအာရုံခံ ABS ။5ရုပ်သံလိုင်း၊ အာရုံခံကိရိယာလေးစင်း။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ABS ဘယ်မှာလဲ။
သင်၏ Abs ကြွက်သားများနှင့်တွေ့ဆုံပါပထမ ဦး စွာခန္ဓာဗေဒသင်ခန်းစာအနည်းငယ်။ နောက်ကျောရှိကြွက်သားများနှင့်အတူဤသော့ချက်ကျသောဝမ်းဗိုက်သည်သင်၏အဓိကကျသည်။ ပြင်ပ Obliques: သင်၏နှစ်ဖက်အပေါ် abs ၏အပြင်ဘက်အလွှာ; ဤရွေ့ကားအောက်ဖက်ထောင့်ဖြတ်ပြေး။